देशभर ५० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न – ABC KHABAR
२७ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर ४२.६५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ
देशभर ५० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको छ । समयमै मनसुन भएका कारण आकाशे पानीको भरमा धान रोप्ने किसानले नियमित रूपमा रोपाइँ गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले असारको चौथो हप्तासम्म देशभर धान रोपाइँ हुने खेतमध्ये आधामा रोपाइँ सकिएको जानकारी दिए ।
‘बिहीबारसम्म देशभर ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ सकिएको छ,’ उनले भने । मन्त्रालयले पा“च विकास क्षेत्रफलबाट प्रत्येक साता रोपाइँको तथ्यांक संकलन गर्ने गरेको छ । पाँच विकास क्षेत्रले पछिल्लोपटक २७ असारसम्मको तथ्यांक पेस गर्दा देशका ७५ वटै जिल्लामा ४२.६५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको जानकारी दिएका थिए ।
धानखेतीको क्षेत्रफल कम हुने हिमाली र पहाडी भेगमा तुलनात्मक रूपमा बढी रोपाइँ सकिएको छ । तराईमा अन्यको भेगको भन्दा कम रोपाइँ भएको छ । तर, तराईमा धानखेती हुने क्षेत्रफल धेरै छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार धानखेतीमा तराईको ७१ प्रतिशत, पहाडको २६ प्रतिशत र हिमालको ३ प्रतिशत योगदान छ । यो वर्ष देशभर १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने सरकारको अनुमान छ । यसबाट कुल ५४ लाख टन धान उत्पादन हुने सरकारको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी ५२ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएको छ ।
मौसमअनुकूल रहेका र उन्नत बिउको प्रयोग तथा रासायनिक मलको उपलब्धता रहेका कारण आगामी सिजनमा धान उत्पादन बढ्ने अपेक्षा राखिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
कहाँ कति रोपाइँ ?
पूर्वाञ्चल : उच्च पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा ३२.३५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । मध्यपहाड इलाम, पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुरमा ३४.०७ प्रतिशत तथा तराईमा रहेका झापा, मोरङ, सुनसरी सिरहा र सप्तरीमा १९.५६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । पूर्वी तराईका पाँच जिल्ला सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र हुन् ।
मध्यमाञ्चल : उच्च पहाडी जिल्ला दोलखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा ५८.१३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । मध्यपहाडी जिल्ला रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर र धादिङमा ५४.६८ तथा तराईका जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, पर्सा, बारा, रौतहट र चितवनमा ३५.२३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।
पश्चिमाञ्चल : उच्च पहाडी जिल्ला मुस्ताङ र मनाङको केही स्थानमा फाट्टफुट्ट रोपाइँ हुने गर्छ । मध्यपहाडी जिल्ला पाल्पा, गोरखा, म्याग्दी, स्याङ्जा, बाग्लुङ, तनहुँ, लमजुङ, अर्घाखाँची र गुल्मीमा ४६.७२ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । त्यस्तै तराईका कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीमा ४५.२१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल : उच्च पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा धानखेती हुने क्षेत्रफल कम छ । त्यहाँ ८७.४१ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । मध्यपहाडी जिल्ला सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम, रोल्पा र प्युठानमा ५७.८२ प्रतिशत तथा तराईका बाँके, बर्दिया र दाङमा ४१.७० प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल : उच्च पहाडी बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा ८१.४६ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ । मध्यपहाडी जिल्ला डडेल्धुरा, डोटी, बैतडी र अछाममा ८६.४० प्रतिशत तथा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा ८८.२३ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको छ ।
कविता – गाउँ छोडेको प्रमाणपत्र